Meksika: Ny “Kristalin’ny Lasapely Sixtine” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Mey 2017 5:36 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Italiano, Français, Español, Ελληνικά, русский, عربي, English
(Marihina fa tamin'ny 20 Janoary 2011 no nanoratana ny lahatsoratra teny anglisy)
Natokana ho fitrandrahana ny harena ankibon'ny tany nanomboka tamin'ny taona 1794 ny tanàndehibe antsoina hoe Naica any amin'ny fanjakana avaratr'i Chihuaha, Meksika; kanefa nahazo laza iraisam-pirenena ny toeram-pitrandrahana roa taona lasa izay rehefa tonga ny fahitana ilay antsoina fatratra hoe ny Lavabato Kristaly. Hita ao anatin'ny lavabato ny kristaly goavam-be “mahafinaritra indrindra” fantatra amin'ny anarana hoe “Vatom-Bolana” .
Gypsum v. Selenite. Sary avy amin'ny mpisera Flickr B. Tse nahazoana alàlana avy amin'ny lisansa CC BY-NC-ND 2.0
Araka ny fanazavan'ilay bilaogera Carlos Roque Sánchez tao amin'ny Blog de Superheroes [es]:
Nitranga izany rehefa teo am-panamboarana ny tonelina vaovao hanaovana fitrandrahana mineraly bebe kokoa, ary rehefa tafiditra lalina tany amin'ny efa-jato metatra (400 m) tany ho any, dia nahita lavabato lehibe tampoka feno kristaly selenita (gypsum) izy ireo, tokony ho folo metatra (10 m) ny lavany, ary tokony ho iray metatra (1 m) ny sakany.
Tena fampisehoana sarotra takarin'ny saina.
Tsy mbola nisy olona nahita zavatra toy izany hatrizay. Ilay natiora tena mahatalanjona izay nahagaga ireo mpitrandraka ny fahitana azy tamin'ny tsy nampoizina.
Nanohy ny lahatsorany i Carlos, nanazava ny zava-tsarotra natrehan'ireto olombelona [es] rehefa niditra ny lavabato:
Mazava ho azy fa tsy misokatra ho an'ny daholobe ny toerana. Ny halaliny eo amin'ny sivifolo amby telonjato metatra (390 m), sy ny maripana mihoatra ny dimam-polo degre Celsius (50 º C) ary ny rivotra feno hamandoana efa ho zato isan-jato (100%), no mahatonga azy tsy ho azo hiainan'ny olombelona
Noho izany toe-javatra izany, mandritra ny valo minitra monja no azonao hiainana ao anatiny, alohan'ny hiatrehanao ny tsy fahampian-drano, alohan'ny “hampikarainkona anao.” Toerana mahafaty iray miorina ao anatin'ilay antsoina hoe ny fangitry ny helo.
Hoy ny bilaogy The Flysch Deposit raha nanampy izany:
Mandràra ireo mpitrandraka sy ireo mpandavaka hafa liana amin'ny vato ny varavaram-by mavesatra sy ny lalàna ao Meksika avy amin'ny mpandalina ny vato kristaly. Raha tsy misy ny rano manohana izany dia mety hitolefika ny kristaly ary hitresaka noho ny havesarany. Hanimba ny voninahiny ny gazy karbonika sy ny etona hafa ankehitriny satria mahazo rivotra izy ireo, .
Namarana ny lahatsorany tamin'ny fanononana an'i Superman sy kryptonite [es] i Carlos tao amin'ny Blog de Superheroes, ary nanambara ny anaram-bositra malazan'ny lavabato:
Ary tahaka ny taram-pahazavana lehibe izay mameno ny lavaka ireo kristaly lehibe. Ny lavaka izay manome ny tontolo mivantana any amin'ny tontolo hafa.
Teo no nahazoako ny firesahana momba ny tanjaka Kryptoniana an'i Superman .
Ny fitsapana tsara ho an'ny hatsaran-tarehy tsy manam-paharoa no nahatonga ny anaram-bositra izay nomena azy hoe: ny Kristalografin'ny Lasapelin'ny Sixtine .
Ny kristaly Selenite Gypsum tao Naica, Meksika. Ao amin'ny Mozean'ny Tantaran'ny Zavaboahary ao Los Angeles. Sary avy amin'i Julian Fong, mpisera levork Flickr , nahazoana alàlana avy amin'ny lisansa CC BY-SA 2.0
Raha hijery ny sarin'ity natiora mahagaga ity na te-hahafantatra bebe kokoa momba an'i Naica dia tsidiho ny Tranonkala Ofisialin'ny Tetikasa Naica sy ny tahirin-tsary ao amin'ny Jeografia Nasionaly sy ny lahatsary.